[फिल्म] कङ: स्कल आइल्यान्ड– दानवताभित्रको मानवता - मनोरञ्जन - नेपाल
[फिल्म] कङ: स्कल आइल्यान्ड– दानवताभित्रको मानवता
दानव मूल पात्र भए पनि क्लाइमेक्समा दर्शकको आँखा रसाउन सक्छ ।
पूर्ण कल्पनामा आधारित फिल्म बनाउन हलिउड खुब माहिर छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै कथालाई नवीन र रहस्यमयी दुनियाँमा पुर्‍याइएको हुन्छ । डरलाग्दा र अजीवका पात्र जन्माइन्छ । तर, जति नै फरक संसार र पात्रको कथा भने पनि त्यसको केन्द्रमा प्रेम, घृणा र संघर्षजस्ता शाश्वत सत्य नै हुन्छन् । भलै, सर्जकका रूपमा निर्देशकले व्यक्त गर्ने शैली र स्वरूप फरक होस् । कङ : स्कल आइल्यान्ड त्यस्तै अनौठो पात्र र परिवेशको कथा हो । किङ कङ प्रेmन्चाइज अन्तर्गतको यस फिल्मलाई जोर्डन रोबर्ट्सले निर्देशन गरेका हुन् । रहस्यमयी र बेखबर टापुका बारेमा खोज गर्न हिँडेको टोलीको भोगाइ हो, यो फिल्म, जसको मुख्य पात्र नै अजंगको राक्षस छ । तैपनि, संवेदना र भावनाको सही सम्मिश्रणले फिल्मलाई उचाइ दिलाएको छ । कम्प्युटर निर्मित पात्र (सीजीआई) त्यत्तिकै विश्वसनीय लाग्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा एक अमेरिकी र जापानी सैनिकबीचको आमनेसामने भिडन्तबाट सुरु हुन्छ कङ : स्कल आइल्याड । तर, मूल कथा भने १९७० को दशकको हो । अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकृत र्‍यान्डा (जोन गडम्यान) एउटा समूहका साथ केही पत्तो नलागेको टापुको खोजीमा निस्कन्छन् । उनको टोलीमा नामुद ट्रयाकर जेम्स कोन्र्याड (टम हिल्डस्टोन), सेनाका कर्णेल प्रेस्टन प्याट्रिक (स्यामुला एल ज्याक्सन), फोटोग्राफर म्यासन वेभर (ब्रि लार्सन), जीवविज्ञ सान ली (जिङ टियान), सेना र अन्य वैज्ञानिक सहभागी छन् । उनीहरू निकै कष्टकर ढंगबाट उक्त आइल्यान्ड त पुग्छन् तर त्यहाँ उनीहरूले कल्पनै नगरेको राक्षससँग मुठभेड गर्नुपर्छ, जसले वर्षौंदेखि टापुमा राज गरिरहेको हुन्छ । त्यसो त टापुमा अन्य हिंस्रक जीव पनि नभएका होइनन् तर खास समस्या कङका कारण पैदा हुन्छ । अब टोलीले कङ र अन्य जीवबाट कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ला ? उनीहरूको मिसन पूरा होला ? यिनै जवाफसँगै फिल्म सकिन्छ ।
सुरुआतमा र्‍यान्डाले सरकारबाट स्वीकृति पाउन र टोली बनाउन गरेको दौडधुप त्यति प्रभावकारी छैन । टापुसम्मको यात्रा पनि सामान्य नै लाग्छ । तर, जसै कङको उदय हुन्छ, रोचकताले भरिदै जान्छ । कङ र टोलीको पहिलो भिडन्तलाई निर्देशकले अत्यन्त आकर्षक शैलीमा खिचेका छन् । कङ यति अजंग र वलिष्ठ छ कि हातले हेलिकप्टर ध्वस्त बनाउन सक्छ । उसलाई तह लगाउन आधुनिक हतियार पनि कामयाबी हुन्नन् । तैपनि, कङबाट टोलीले उन्मुक्ति पाउँछ । त्यसपछि कङलाई हेर्ने दृष्टिकोणको अन्तरले टोलीमा फाटो आउँछ । कर्णेल प्याट्रिक जसरी पनि कङलाई मार्नुपर्ने अभियानमा लाग्छन् भने जेम्स र म्यासनले टापुमा कङको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्ने मत राख्छन् । भिन्न पात्रका भिन्न सोचमार्फत निर्देशकले मान्छेका फरक मनोविज्ञान र व्यवहारलाई केलाउने प्रयास गरेका छन्, जसले दर्शकलाई फिल्ममा थप ‘इन्गेज’ गर्छ ।
कङ, टापुका अन्य हिंस्रक जन्तु र तीसँगका द्वन्द्वका दृश्य एनिमेनसनद्वारा निकै चाखलाग्दो बनाइएको छ । अझ थ्रिडीमा हेर्दा छुट्टै रोमाञ्चकता पैदा हुन्छ । ती पात्र कम्प्युटर निर्मित हुन् भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै विश्वसनीय बनाइदिनु निर्देशकको खुबी हो । पर्दामा देखिने एनिमेटेड दृश्यको रोमाञ्चकता पृष्ठभूमि संगीतले अझ बढाएको छ । उसो त फिल्ममा डरलाग्दो जीव र तीसँगको फाइट मात्र होइन, टापुको सुन्दरतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान त्यही टापुमा हराएका एक पूर्वसैनिकको आगमन ‘सरप्राइज’ लाग्छ । टोली टापु पुगेकै कारण तीन दशकपछि उनको परिवारसँग पुन:मिलन हुन्छ । ती सैनिक र टापुका आदिवासीबीचको मिलनलाई संवेदनासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
कम्प्युटर निर्मित पात्र र वास्तविक कलाकारको रसायन सुहाउँदो छ । हिल्डस्टोनको अभिनयमा ‘हिरोइजम’ देखिन्न, बरू उनको विगत र कङलाई जोगाउन गरेको संघर्षले दर्शकको मन जित्छ । क्लाइमेक्सतिर भिलेनझैँ देखिने ज्याक्सनको काम पनि प्रभावकारी छ । फोटोग्राफर बनेकी लार्सन आफ्नो भूमिकामा फिट छिन् । कङ र लार्सनबीचको एकअर्काप्रतिको प्रेम फिल्मको मुटु हो । कतिसम्म भने दानव मूल पात्र भए पनि क्लाइमेक्समा दर्शकको आँखा रसाउन सक्छ ।
किङ कङ र एक्सन थ्रिलर फिल्मका पारखीले कङ : स्कल आइल्यान्ड हेर्दा आनन्द महसुस गर्ने छन् ।